Intsikelelo yamaphupha malunga neentlanzi kunye ne-aquarium: yintoni le ntlanzi ephupha ngayo, yintoni i-aquarium iphupha ngayo
Ukubona i-aquarium neentlanzi ephupheni, yintoni na? Ukutolika
Ukutolika okuqhelekileyo kwamaphupha ngeentlanzi kukukhulelwa. Kodwa oko kwenzeka ukuba kuxhomekeke kwisalathiso, ukuchazwa kuya kutshintsha kwakhona. Ngokomzekelo, intlanzi ye-aquarium ifanekisela umntu uninzi lweziganeko ezivuya. Ukuze uguqule ngokucacileyo iphupha, kufuneka uqwalasele zonke iinkcukacha ezincinci.
Ngokuxhomekeka kwisini kunye nesimo somphuphi kuluntu, kunye nokubonakala kwabemi be-aquarium, unokufumana ukuba zeziphi iimeko eziza kusondela.
Kubantu bezoshishino olo phupha lithembisa inzuzo enkulu kwi-transaction. Okokuqala, oku kukukhathalela ukwanda okwenziweyo kwimali.
Abasetyhini abasetyhini abangakhange bafumane intsapho, intlanzi ye-aquarium ephupheni ifanekisela intlanganiso kunye nomhlobo omdala oya kwenza umnikelo kwaye avume ukuba uzive evelele.
Amantombazana angayibona le mbono njenge-harbinger yokukhulelwa kwangaphambili. Kubalulekile ukukhumbula umbala weentlanzi. Ukuba omnye, ngoko ke mhlawumbi ukuzalwa kwamawele okanye amawele.
Kubalulekile ukuqwalasela ukuba intlanzi ye-aquarium okanye iphupha yenza ntoni ngokwabo. Iziganeko ezininzi zexesha elizayo zixhomekeke kule nto.
Baxhuma ngaphandle kwe-aquarium. Ngaloo ndlela, umntu obuthongo engazi kakuhle ufuna ukutshintsha imeko apho ekhona okwangoku. Oku kungabandakanyeki nje kuphela kwimisebenzi kunye nobomi bemihla ngemihla, kodwa kunye nomnqweno olula wokuya eholide kumazwe angaziwa. Kwaye abo basebenzele ixesha elide kwiqela elifanayo, oku kungumqondiso oqinisekileyo wokukhangela umsebenzi omtsha.
Abemi base-aquarium abafileyo bayabonwa njengobungqina obubi. Ba thembisa ingxaki enkulu nabantu abasondeleyo. Ngaphezu koko, zonke iziganeko ziya kwenzeka ngephutha lomphuphi.
Intlanzi, yokuhlala e-aquarium engcolileyo, kuthetha ukuba imo yomntu ayiyi kuzisa into enhle. Oku kuboniswe ngokukodwa ekusebenzeni ubudlelwane. Imeko kwiqela ingaba nzima kangangokuba umbuzo wokutshintsha imisebenzi uza kuba yinto ebalulekileyo ebomini.
Kuya kuba luncedo kakhulu ukwazi ukuba intlanzi encinci ebhankini iphupha ngayo. Ukutolika kuya kunceda ukujongana nezinye iingxaki zempilo. Iphupha elinjalo lithetha ukuba umntu usebenza kwintlangano engabonakaliyo, kwaye ukuxhatshazwa okuqhubekayo kubangela ukukhathala okungapheliyo.
Ukubamba inhlanzi ye-aquarium
Ngokuxhomekeke ekubeni ngubani owenzayo kunye nezinto ezenziwayo, iphupha elinjalo lingahlula ngokupheleleyo.
Ngokuqhelekileyo, ukubamba intlanzi kwincwadi yephupha kuthetha intsingiselo kunoma yintoni na umcimbi owamkelekileyo. Umzekelo, kubafundi, iphupha elinjalo lithetha ukuba iseshoni yokuzinikela ngokuphumelelayo, kunye nabantu abasebenzayo-ukwanda okwenyuka kumvuzo okanye ibhonasi engalindelekanga.
Ubuthongo, apho uloba ngentlanzi, lubuhlungu kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, uya kudibana nabantu abatsha abanolwazi, kodwa emva kwexeshana uluntu lwabo luba nzima kakhulu kuwe.
Intombazana encinane eyathengisa i-aquarium kwaye ibamba intlanzi ephupheni, kungekudala inokudibana nomfana osebutyebi oza kuba nobudlelwane obude naye.
Omnye umntu ovela kwintandane ethandwayo, ephupheni ebukele intlanzi enemibala e-aquarium, unokufumana ithemba elithile elifanelekileyo. Ingakumbi ixhala ngekhefu.
Ukuba uphupha ukuba uyondla iintlanzi, ngoko unokuqiniseka ukuba ngokwenene imicimbi yakho iya kunyuka. Ngokukodwa ngokuqinisekileyo, oku kuza kuboniswa kwiintsebenziswano nabantu abagulayo.
Kubalulekile ukukhumbuza ukuba inani elikhulu lezinto lichaphazela ukuchazwa kakuhle kwamaphupha: ukuziphatha komphuphi ngokwakhe, umoya oqhelekileyo wokulala kunye nezinto ezibonakalayo emva kokuvuswa.
Yiyiphi iphupha lamakhukhamba - ukutolika kunye nencazelo yokulala
Imfihlo yobuthongo. Kutheni ugcina iindwendwe zasekhaya?
Ukuphuhliswa kobuntu bomntwana kwiminyaka yobudala
Unokukunceda njani umyeni wam xa engafani kunye nomsebenzi
I-Orlando Bloom yamisa i-Intanethi "iifoto" ezingabikho
Ungayifumana njani indawo?
Indlela yokwenza ityhulafile yetafile yonyaka omtsha?